यति भए पनि बुझ्नै पर्छ कि जीवन अझै बाँकी हुन्छ, सम्बन्धका लागि पढ्नै पर्ने कुरा - यादका टुक्रा
यति भए पनि बुझ्नै पर्छ कि जीवन अझै बाँकी हुन्छ, सम्बन्धका लागि पढ्नै पर्ने कुरा
‘सम्बन्ध विच्छेद’ दाम्पत्य जीवनमाथि लागिएको एक यस्तो घाउ हो, जसलाई विच्छेद गर्नेले भुल्न चाहे पनि समाजले उनीहरुलाई कोट्याइरहन्छन् । मान्छेहरु सोध्छन्, ‘अब के गर्ने ?’, ‘विवाह गरिसकेपछि सम्बन्ध तोड्न हुँदैनथ्यो’, ‘अब एक्लो जीवन कसरी बिताउँछौं ?’
हाम्रो समाजले विवाहलाई एक अनिवार्य आवश्यक्ता मान्छ । जब युवतीको कुरा आउँछ, तब विवाह अपेक्षाकृत जरुरी मानिन्छ । विवाहलाई यसकारण अनिवार्य आवश्यक्ता मानिन्छ कि हरेक मान्छेलाई एक साथीको जरुरी हुन्छ । जो मानसिक रुपले, भावनात्मक रुपले आर्थिक स्थितीमा र कठिन परिस्थितीमा उनको साथ खडा रहन सकियोस् । समाजले विवाहलाई यसकारण पनि धेरै महत्व दिन्छ, ताकि छोरीले एक सम्मानजनक र ठोस जीवन बाँच्न सकोस् । तर, त्यही विवाह उनको जीवनको बोझ बन्छ भने उनी त्यो बोझ बोकिरहन सक्दैनन् । उक्त बोझलाई मिल्काउन नै उचित सम्झनेछ । हुन त दाम्पत्य सम्बन्ध खल्लो बन्नु वा टुट्नमा महिला दोषी हुन् वा निर्दोष, समाजले उनलाई साधरण नजरले हेर्न बन्द गर्छ । सम्बन्ध विच्छेदपछि महिलाहरुलाई फरक दृष्टिले हेरिन्छ, मानौ उनी एलियन हुन् । महिलाहरुले एकतर्फ टुटेको दाम्पत्यको चोट झेलिरहेका हुन्छन्, अर्कोतर्फ मान्छेहरु उनीमाथि अनेक प्रश्नहरु गर्छन् । र, उनको मनोवल कमजोर बनाउने काम गरिन्छ ।
कठोर र चुनौतीपूर्ण निर्णय : कोही आफ्नो निर्णयले खुसी छन्, त कोही सम्बन्ध विच्छेदका कारण जीवनभर पीडा झेलिरहेका छन् । आर्थिक रुपले कमजोर वा अर्कामाथि निर्भर महिलाका लागि निश्चय पनि एक्लो जीवन सहज हुँदैन । यद्यपि आर्थिक रुपले सक्षम र कामकाजी महिला जो आफ्नो करियरलाई बढी महत्व दिन्छन्, बन्धनमा अल्झिरहन, विनाकारण नियन्त्रणमा रहन चाहँदैनन् । उनीहरु त्यस्तो सम्बन्धबाट बाहिर आउन नै उचित ठान्छन् । आफुमाथि भएको अत्याचारलाई चुपचाप सहनका साटो त्यससँग जुध्न र अत्यचारीलाई जवाफ दिने साहस गर्छन् । यस्ता महिलालाई समाजले हतोत्साही गर्नुको साटो हौसला दिएर आफ्नो करियरमा नयाँ उर्चा प्राप्त गर्नका लागि साथ दिनुपर्छ ।
सम्बन्ध विच्छेद गर्नु कुनै पाप होइन । हिंसा, अन्याय, क्रुरताको विरोध गरेर त्यसबाट मुक्त हुने बाटो हो । यसपछि पनि जिन्दगी अन्त्य हुँदैन । बरु नयाँ बाटो खोजेर अनन्त संभावनाहरुको खोजी गर्न सकिन्छ । सम्बन्ध विच्छेदको निर्णय लिन एक कठिन काम हो । चाहे महिला होस् वा पुरुष । यद्यपि दाम्पत्य जीवन जब बोझिलो बन्छ तब त्यसबाट उम्कनु नै सही हुन्छ । एक महिला जब सम्बन्ध विच्छेदको निर्णय लिन्छन्, तब उनको लागि यो निकै चुनौतीपूर्ण हुनजान्छ । आमाबुवा, नातेदार, समाज सबैलाई पन्छाएर आफैको लागि सोच्नु हिम्मतको कुरा हो । त्यसैले जब उनी यो निर्णय लिन्छन् तब उनलाई थाहा हुन्छ कि यो एकदमै महत्वपूर्ण निर्णय हो, जो उनको भविष्यको लागि राम्रो सावित हुनसक्छ ।
बाँकी छ जिन्दगी : श्रीमानसँग छुटिनु सबैभन्दा दुखद क्षण हो यसपछि महिलाको जिन्दगी फेरी पुरानै लयमा फर्कदैन । यो सोचाई गलत हो । कतिपयको सोंच हुन्छ, आफ्नो विवाह टुटेपछि जीवनको कुनै अर्थ रहनेछैन । यस्तो पटक्कै होइन । सम्बन्ध विच्छेदपछि उनीहरु खुसी रहन सक्छन् । आफ्नो भविष्य खोज्न सक्छन् । आफ्नो सपना र महत्वकांक्षालाई पुरा गर्न जुट्न सक्छन् । एक्लो महिलालाई मान्छेहरुले खराब दृष्टिले हेर्छन् वा त सहानुभूतिको नजरले । यद्यपि अर्काको यस्तो सहानुभूति आवश्यक छैन । जरुरी छ कि उनको निर्णयलाई सम्मान गरियोस् । सम्बन्ध विच्छेद गरेका वा श्रीमान्बाट अलग भएका महिलालाई मान्छेको झुटो सहानुभूती होइन, उनको निर्णयप्रति सम्मानको भावना चाहिन्छ । जसले उनलाई अगाडिको जीवन बाँच्न सहज भइदियोस् । सरिताबाट भावनुवाद
Don't Miss it दोस्रो पटक पनि हुन सक्छ सम्बन्ध विच्छेद, यसरी बढाउन पर्छ जीवनलाई
Up Next यी ४ कुराहरु सम्बन्ध टिकाउन साह्रै महत्वपुर्ण छन्, जुन कुनै विश्वविद्यालयले सिकाउदैन
विवाह एउटा त्यस्तो अटुट बन्धन हो, जसमा दुई व्यक्तिसहित दुई भिन्न परिवारको पनि नाता-सम्बन्ध जोडिन्छ । विवाहको सम्बन्धमा बाँधिएपछि दुई…
10 hours ago 1969 Views
दम्पतीबीच हुने शिष्टचार आवश्यक छ, यो ढोंग वा नौटंकी होइन
अरुको सामुन्ने हामी आफुलाई शिष्ट देखाउने यत्न गर्छौ । अरुकै खातिर सानोतिनो कुरामा पनि शिष्टचार पालना गरिरहेका हुन्छौ । कसरी…
10 hours ago 979 Views
विवाहलाई बन्धन पनि भनिन्छ । यो प्रेमको बन्धन हो । मर्यादाको बन्धन हो । भरोसाको बन्धन हो । विश्वासको बन्धन…
10 hours ago 6314 Views
रुम पार्टनर छान्दा हतार गर्दा यस्ता समस्या पर्न सक्छन्
आफ्नो घरभन्दा टाढा गएर अध्ययन वा जागिरको लागि एक्लै भाडामा बस्नु परेमा हामीहरु रुम पार्टनरको खोजी गर्ने गर्दछौं । पैसाको…
4 days ago 55 Views
‘भष्मे डन’को दाम्पत्य जीवनको कथा यस्तो छ, पढ्दा खुसी लाग्छ
‘भष्मे डन’ भनेपछि धेरैको स्मृतिमा एउटा अनुहार आउँछ, चिन्डे टाउको भएका एक अधवैंशे । बागमति किनारलाई आफ्नो साम्राज्य बनाएर बस्ने…
4 days ago 110 Views
आफुले माया गरेको मान्छेलाई कसरी बिर्सने ?
मानिसका सबै भाव मध्ये प्रेमको भाव सबै भन्दा रोमान्चक अनि सन्तोषजनक हुन्छ । जब मानिस आँफुले प्रेम गरेको मान्छे बाट…
1 year ago 26516 Views
छोटो समयमा मोटोपन घटाउन यी १३ कुरा नै हुन् अति सजिला
तौल बढ्नु वा मोटोपन हुनु न स्वास्थ्यको दृष्टिले फाइदाजनक हो, न व्यक्तित्वको हिसाबले नै । मोटोपन कसरी घटाउने त ?…
5 months ago 498 Views
एक्कासी आए जीवनमा भुतपुर्व प्रेमीप्रेमिका, यस्तो हुन्छ अनि, के गर्ने ?
केहीवर्ष अगाडिसम्म जीवनमा प्रेम भनेको केवल एक जनासँग मात्र हुन्छ भन्ने भनाई थियो । तर, अहिलेका पुस्ताले यो भनाईलाई जुठो…
10 hours ago 3438 Views
9 hours ago 2306 Views